Ebee ka ịmalite mmalite? | Martech Zone
Ebee ka ịmalite mmalite?
Tuesday, February 24, 2009 Tuesday, October 7, 2014 Douglas Karr
Onwere uru di egwu ibido ulo oru na Indiana. Ndị ndu nke ndị ọchụnta ego bụ netwọkụ siri ike nke ndị tụkwasịrị obi ma gosipụta. Ekwuola m banyere Indiana na Indianapolis dị ka ebe bụ isi maka ụlọ ọrụ ịmalite azụmahịa. Ndị ahụ gụrụ akwụkwọ ma na-arụsi ọrụ ike. Reallọ ala ahụ ka bụ otu n'ime ahịa kwụsiri ike na mba niile.
Ọ bụrụ na m ga-amalite azụmahịa, Indianapolis bụ ebe m chọrọ ịbụ! Azụmaahịa ụlọ ala adịghị ọnụ ma steeti na gọọmentị mpaghara na-akwado azụmahịa.
O zuola ịmalite azụmahịa, ọ bụ ezie?
Ibido azụmaahịa chọrọ ego. Ndi Indiana ha nwere ya?
The Ego nke 21st Century na-elekwasị anya na azụmaahịa azụmaahịa nke gosipụtara ikike ahịa maka azụmaahịa nke teknụzụ ọhụụ.
Fọdụ ndị nkatọ na-arụ ụka na, ọ bụ ezie na ngwanrọ na teknụzụ yiri ka ha nwere ọtụtụ ọrụ, na bio-technology na-adọta ọtụtụ ego. Otu ihe kpatara ya nwere ike ịbụ njikọ dị na mpaghara na teknụzụ bio-nwere na sistemụ Mahadum. Enwere m olileanya na nke a abụghị ikpe - enwere m olileanya na ego a ga-aga n'echiche yana ohere kachasị.
Na mpụga nke Ego 21st Century Fund, enweghi ọtụtụ nhọrọ. Inye ego nke onwe nwere uru karịa ego nke Venture Capitalist ebe ọ na-abịakarị na obere eriri ejikọtara. Agbanyeghị, ego nkeonwe na-aga n'ihu na-abanye n'ime ndị ọchụnta ego obodo ndị kwụrụ ụgwọ mmalite ndị ọzọ… ma kwụrụ ụgwọ… ma kwụọ ụgwọ… ma kwụrụ ụgwọ. Ọ dị ka onye ọ bụla na-alaghachi otu ihe ugboro ugboro.
Steeti Indiana nwere 2 billionaires. Otu enyi m kọọrọ m taa na Orange County, California nwere billionaires 8 ruru ihe karịrị ijeri dollar 28. Nke ahụ bụ nnukwu ihe dị iche, ma na-emetụta ikike maka mmalite obodo iji nweta ego.
Yabụ - ajụjụ a abụghị ebe kachasị mma ịmalite mmalite. Ajụjụ a nwere ike ịbụ ebe enwere ego iji kwụọ ụgwọ mmalite gị! O nwere ike ịbụ oge itinye ego karịa na ego 21st Century ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebe ka ịchekwa azụmaahịa a dị na mpaghara gị!
Anyịnya Anọ nke mmalite
Etu esi egbutu okporo ụzọ Blog gị na ọkara
Feb 24, 2009 n’elekere 9:38 nke abali
Ezigbo ihe enyemaka ọzọ bụ Funding Innovations Fund sitere na Purdue.
Azụmaahịa Matt azụmahịa
Feb 24, 2009 na 3:10 PM
I kwuru ya nke kacha mma Douglas. Gaa ebe ego dị. Maka ọtụtụ mmalite, ego bụ ebe ndị nwere ikike itinye ego nọ.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ SaaS, ị nwere ike ịchọta ego na Silicon Valley, Boston, Austin ma ọ bụ Boulder.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ mmalite nke anyanwụ, ikekwe Phoenix ga-abụ ebe dị mma ịnọ.
Ozugbo ị na-arụ ọrụ ma na-akwụ ndị ahịa ụgwọ, mgbe ahụ ọ nwere ike ịdị mkpa ịmepe ụlọ ọrụ mpaghara ebe ndị ahịa gị nọ. Echere m na Wal Mart chọrọ ndị na-eweta ha ka ha nwee ọfịs mpaghara n'akụkụ isi ụlọ ọrụ ha.
Mar 1, 2009 na 3: 03 AM
Indiana na-ekwu maka ọchịchọ ya ịbụ ebe mbido enyi. Mana omume ahụ anaghị akwado nke a. Onyinye 21st Century Fund bụ obere mpempe na mmalite dị mma. Agbanyeghị, achọrọkwa ihe ndị ọzọ dịka ego itinye ego, ndị isi ọrụ, wdg. Enwere m olile anya na ihe ga - agbanwe, mana Indiana dị ka ụzọ na - achọghị mgbanwe iji bụrụ onye ọchụnta ego ugbu a. Ikekwe wiil na-agagharị iji gbanwee nke a.
Mar 9, 2009 na 10: 21 PM
Enwere otutu ndi mmadu no na steeti Indiana ndi nwere mmasi banyere mbido Anyanwu. Ana m anwa ime ndị mmekọ ụlọ maka mmalite maka ngwaahịa sitere na anyanwụ. Kim koch